Tag: fanontana | Martech Zone
60% ny Amerikanina no hitsara ny orinasanao miankina amin'ny fisianao amin'ny Internet. Saintsaino kely izany. Na dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanatrehanao an-tserasera aza ny tranokalanao, misy zavatra hafa betsaka noho izany. Mikaroka ny marikao ny olona ary mitsara ny orinasanao miankina amin'ny zavatra mipoitra amin'ny motera fikarohana ihany koa. Ny fampiasam-bola amin'ny PR an-tserasera dia manampy anao hitantana ny fanatrehanao an-tserasera Ny zavatra tiako indrindra amin'ity infographic ity dia ny fanomezana